राकेश रोशन किन सधैं कपाल तक्लु बनाउँछन् ? यस्तो छ रहस्य – Ktm Dainik
राकेश रोशन किन सधैं कपाल तक्लु बनाउँछन् ? यस्तो छ रहस्य - जे देख्छ, त्यही लेख्छ
राकेश रोशन किन सधैं कपाल तक्लु बनाउँछन् ? यस्तो छ रहस्य
अभिनेता ऋतिक रोशनका निर्देशक पिता राकेश रोशन हेर्दा निकै आकर्षक देखिन्छन् । तर, उनको शिर मुण्डन शैली जोकोहीका लागि चासोको विषय बन्छ । उनको शिर मुण्डनलाई लिएर फिल्मकर्मीको अनेक अड्कलबाजी रहन्छ । अर्थात कतिपयले उनलाई केही बिरामी भएर शिर मुण्डन गरेकोसम्म भनेका छन् । तर यसको वास्तविकता भने अर्कै छ ।